WINDOWS 10 ANAGHỊ EJIKỌTA NA NETWỌK WI-FI - WINDOWS - 2019
Dozie nsogbu site na ijikọta netwọk Wi-Fi na Windows 10
Njehie SteamUI.dll na-emekarị mgbe ndị ọrụ gbalịrị ịwụnye mbipute ọhụrụ. Kama usoro nhazi ahụ, onye ọrụ ahụ na-enweta ozi. "Emezughị ibu ọrụ steamui.dll"ihe nrụnye ahụ sokwa.
Dezie njehie SteamUI.dll
E nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu ahụ, na ọtụtụ mgbe ha anaghị eme ihe ọ bụla siri ike maka onye ọrụ ahụ. Mana nke mbụ, jide n'aka na ọrụ Steam anaghị egbochi antivirus ma ọ bụ firewall (wuru ma ọ bụ site na ndị mmepe nke ọzọ). Gbanyụọ ma, ma n'otu oge ahụ chọpụta ndetu ojii na / ma ọ bụ ndekọ nke ngwanrọ nchedo, wee gbalịa imeghe Steam. O kwere omume na n'oge a, nrụpụta nsogbu nwere ike ịfe gị - naanị tinye Steam na ndepụta ọcha.
Gbanyụọ firewall na Windows 7
Gbanyụọ Onye Nche na Windows 7 / Windows 10
Usoro 1: Tọgharia Ntọala Steam
Anyị na-amalite site na nhọrọ kachasị mfe na nke mbụ bụ ịtọgharịa ntọala Steam site na iji iwu pụrụ iche. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ji aka rụọ, dịka ọmụmaatụ, enweghị ntọala mpaghara.
Mechie onye ahịa ma jide n'aka na ọ gaghị eso ọrụ ndị na-agba ọsọ. Iji mee nke a, meghee Njikwa Taskgbanye gaa "Ọrụ" ma ọ bụrụ na ịchọta "Ọrụ Ndị Nzuzo Steam", pịa ya ma họrọ "Kwụsị".
Na windo Gbaa ọsọisi ihe Nweta + Rtinye otusteam: // flushconfig
Mgbe ị rịọrọ maka ikikere ịmalite usoro ihe omume ahụ, zaghachi na nke a. Mgbe nke ahụ gasịrị, malitegharịa kọmputa ahụ.
Ekem, utu ke ụzọ ụzọ mbụ ị na-abanye onye ahịa ahụ, mepee folda Steam (site na ndabaraC: faịlụ mmemme (x86) Steam) ebe a na-echekwa faịlụ EXE nke otu aha, ma na-agba ya.
Ọ bụrụ na nke a adịghị edozi njehie, gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 2: Hichaa nchekwa Steam
Maka eziokwu na ụfọdụ faịlụ ababiri ma ọ bụ n'ihi nsogbu ọ bụla ọzọ na faịlụ site na Steam ndekọ ma enwere nsogbu nke isiokwu a raara. Otu n'ime nhọrọ dị irè maka iwepụ ya nwere ike ịbụ ihichapụ nhọrọ nke folda ahụ.
Mepee folda Steam ma hichapụ faịlụ 2 ndị a n'ebe ahụ:
Lee ị ga - ahụ Steam.exe, nke na - agba ọsọ.
I nwekwara ike gbalịa ihichapụ folda ahụ. "Echere"nke di na nchekwa "Steam" n'ime nchekwa nchekwa "Steam" wee malite ahịa.
Mgbe iwepuchara ya, akwadoro ka ịmalitegharịa PC gị wee malite Steam.exe!
N'ọnọdụ ọdịda, hichapụ faịlụ na nchekwa niile na Steam, na-ahapụ ndị na-esonụ:
Site na otu nchekwa ahụ, gbakwunye Steam.exe fọdụrụ - usoro ihe omume ahụ ga-amalite imelite ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ zuru oke. Ee e? Gaa n'ihu.
Nzọụkwụ 3: Wepụ mbipụta Beta
Ndị ọrụ ndị gbanwere ụdị beta nke onye ahịa ahụ ga-enwe ike izute mmerụ mmelite. Ọ kachasị mfe iji gbanyụọ ya site na ihichapụ faịlụ ahụ na aha ahụ "Beta" site na folda "Ngwugwu".
Malitegharịa ekwentị gị ma na-agba ọsọ Steam.
Usoro 4: Dezie Njirimara aha
Usoro a bụ ịgbakwunye iwu pụrụ iche na labelụ Steam.
Hụ ụzọ mkpirisi Steam site na ịpị aka na faịlụ EXE na ịhọrọ ihe kwekọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere otu, kwụpụ nzọụkwụ a.
Right pịa na imeghe "Njirimara".
Ịnọ na taabụ "Aha"n'ọhịa "Ihe" tinye oghere na-esote dị iche:-clientbeta client_candidate. Chekwa na "OK" ma na-agba ọsọ mkpirisi edetu.
Usoro 5: Ntinyeghari Steam
Mgbanwe, ma dị mfe nhọrọ - reinstalling the Steam ahịa. Nke a bụ ụzọ zuru ụwa ọnụ nke idozi ọtụtụ nsogbu na mmemme. Na ọnọdụ anyị, ọ ga-enwekwa ike ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ịnweta njehie na ajụjụ mgbe ị na-agbalị ịnwụnye mbipụta ọhụrụ banyere ochie ahụ.
Tupu nke a, jide n'aka na ịmepụta ndabere nke ihe kachasị oké ọnụ ahịa - folda "SteamApps" - Mgbe niile, ọ bụ ebe a, na folda nchekwa "Ọcha", echere egwuregwu niile ị rụnyere. Nyefee ya na ebe ọ bụla site na folda ahụ. "Steam".
Tụkwasị na nke ahụ, a na-atụ aro ka ị kwado nchekwa ahụ dị naX: Steam na egwu egwuregwu(ebe X - akwụkwọ edemede nke na-arụ ọrụ nke Steam ahịa). Nke bụ eziokwu bụ na akara ngosi nke egwuregwu na-agbanye n'ime nchekwa a, na ụfọdụ ndị ọrụ, na-ehichapụ onye ahịa n'onwe ya na ịhapụ egwuregwu, mgbe ntinyeghachi Steam, nwere ike izute ngosipụta nke ụzọ mkpirisi ọcha maka egwuregwu niile kama nke ndị nke ọ bụla n'ime ha setịpụrụ na ndabara.
Mgbe ahụ, gbasoro usoro mwepụ dịka ị ga-eji usoro ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwanrọ iji kpochapụ ndekọ ahụ, tinye ya ọzọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, gaa na onye mmepụta ọrụ nke onye ọrụ ahụ, budata na wụnye ọhụụ ọhụrụ nke onye ahịa ahụ.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke Steam
Mgbe ị wụnye naanị bụrụ ikpe, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gbanyụọ antivirus / firewall / firewall - niile ndị na-agbachitere usoro ndị ahụ nwere ike imebi ọrụ Steam. N'ọdịnihu, ọ ga-ezu iji tinye Steam na ndepụta ọcha nke usoro antivirus iji malite ma melite ya n'efu.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ụzọ ndị dị n'elu kwesịrị inyere onye ọrụ ahụ aka. Otú ọ dị, ọ dịkarịghị, ihe kpatara kpatara SteamUI.dll ka ọ daa bụ nsogbu ndị ọzọ, dị ka: enweghi ikike onye nchịkwa iji rụọ ọrụ Steam, ọgba aghara, nsogbu ngwaike. Ọ ga-adị mkpa ịchọpụta nke a site na onye ọrụ ahụ n'onwe ya na nke ọzọ site na mfe dị mgbagwoju anya.